Israely: Mpampiasa Aterineto Manohitra Mafy Ny Mety Ho Fanafihana Atao Amin’i Iran · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Novambra 2011 12:29 GMT
[Rohy amin'ny teny Anglisy sy Hebreo] Tatitra avy amin'ny fampahalalam-baovao Israeliana maro tato ho ato no niresaka ny mety hisian'ny fanafihana hataon'ny Israeliana amin'ireo foto-drafitrasa nokleary any Iran. Ireo tatitra dia nilaza fa ny masoivoho miandraikitra ny filaminana, ny IDF, Mossad sy Shin Bet dia samy manohitra ny fampiasan-kery amin'i Iran avokoa, raha toa kosa ny Praiminisitra Benjamin Netanyahu, ny Minisitry ny Fiarovana Ehud Barak ary ny Minisitry ny Raharaham-bahiny Avigdor Lieberman dia samy manosika ny kabinetra hanaiky ny fanafihana an'i Iran. Raha zohiana ireo tatitra ireo, sambany izao ny vahoaka Israeliana no nanomboka niresaka tamin'ny fomba matotra ity olana goavana ity.
Araka ny soratan'i Larry Dafner ao amin'ny +972 Magazine:
Farany, tonga amin'izao ihany. Taorian'ny taona maro nandrenesana sy niresahana izatsy sy izaroa momba ny loza mitatao ateraky ny nokleary ao Iran, dia mandre sy miresaka ny loza mitatao amin'ny fiezahana hisoroka itsy loza voalohany aminà fiaramanidina mpanjera baomba ity firenena ity. Ny rentsika, tsy hoe fotsiny mikasika ny “loza mitatao Iraniana,” fa koa mikasika ny “loza mitatao Israeliana”. Ary taorian'ny taona maro nahenoana ny mpanjaka hasbara miresaka momba an'i Hitler sy ny 1938 ary ny Holocaust, ny vahoaka Israeliana dia mihaino, ankolaka, ireo olona izay inoan-dry zareo kokoa miohatra amin'ireo mpanao politika – ireo matihanina, ireo manao ny raharaha miaramila ho anton-draharahany sy ireo mpitsikilo – ary ny feo ren-dry zareo avy amin'ireny bandy be mokony ireny dia feo mafy, hentitra manao hoe “TSIA”
Ny setrin'ireny tatitra ireny sy ny mety hisian'ny fanafihana ireo foto-drafitrasa nokleary ao Iran dia miiba avokoa eny anivon'ireo Israeliana mpiondana aterineto. Ny sasany aza nanomboka hetsika eo amin'ny Facebook hanaovana hetsi-panoherana eo anoloan'ny Ministeran'ny Fiarovana Israeliana ao Tel Aviv ny 6 Novambra hanoherana ny fanafihana an'i Iran.
Maro ireo mpampiasa aterineto no nahita ny fanafihana an'i Iran ho toy ny tetika fanarian-dia noho ireo onjam-panoherana tato ho ato mikasika ny rariny ara-tsosialy anoherana ny politika ara-toekarenan'ny governemantan'ingahy Netanyahu.
@haimhz: Efa tofoka sahady amin'ny horohoro Iraniana. Raha misy balafomanga nokleary mitontona eto, fanombohan-tselatra no ho hitantsika dia mifarana ny zavatra rehetra. Tsy handre fanaintaina akory. Ny trosa mitambesatra [trosa babena noho ny politika ara-toekarena ao Israely], etsy ankilany, ho tsapanao foana.
@YishaiO: Raha tsy mahita harapaka intsony, hàno ny ady ifanaovana amin'i Iran
@odaskal: Raha izany, nahoana no resahan'ny rehetra ny momba an'i Iran ankehitriny? Raha ny fahitana azy, Ehud Barak dia niara-niasa akaiky tamin'ireo iraka momba ny raharaha miaramila mba handresy lahatra azy ireny fa hoe hihetsika isika. Nahoana? Satria tian-dry zareo hahena ny tetibolam-pandaniana ho an'ny fiarovana
Ny sasany nalahelo ny amin'izay lazain-dry zareo ho hagaigena sy tsy fahatsiarovantenan'ny mpitantana ao Israely
@a_Daydreamer: Olona kaondrana, atsaharo io! Ity dia tsy misy hafa amin'ny hoe: “Oay! Tena ny hamely ahy no tetehan'ilay tsy ampy fandinihana ity! Noho izany dia ny famelezako azy no hataoko tonga aloha, ary dia hahita izy ka hitomany sy hiverina hody!” #Iran
@doroniko: Mba handavoana ny manampahefana Palestiniana, tsindrio ny 1. Ho an'ny ady amin'i Iran, tsindrio ny 2. Ho an'ny balafomanga anjatony mankao Tel Aviv, tsindrio ny 3. Ho fankaherezan-tenantsika eo amin'ny Masada [alohan'ny hanaovana famonoantena faobe], tsindrio ny 4. Ho an'ny Gog sy Magog [faran'izao tontolo izao] tsindrio ny 0 na miandrasa.
@Omerbara: Hitako fa ho avy any Gaza ny fanafihana antsika, ary ny toe-draharaha ao Ejipta sy Siria ka nitenenako irery ny amin'izay tokony ho nolazain'izay milaza azy ho praiminisitra salama saina amin'ny tenany ihany: aleo isika hanokatra vava-ady hafa. #BibiSpeechToTheNation #KabariniBibiHoAnFirenena
@shanirabi: Vahoaka adala. Tsy hoe mangalatra aminao ny zo hiaina am-pahamendrehana sy anaty fivelarana fotsiny ity governemanta ity, fa ankehitriny ny zo hiaina mihitsy no angalariny aminao. #OperationIran
Ny sasany, mazava loatra, dia zatra ny manao sangy ratsy. Mampahatsiaro ireo nitete tato ho ato, nanoratra i Rubynet :
@Rubynet: Fepetra voalohan'ny Klioban'ny Ady Ao Iran, tsy azonao atao ny miresaka momba ny Klioban'ny Ady Ao Iran . #From:SecurityForBeginners. (#Avyaminy:NyFiarovanaHoAnZazaVao)
Itamar Shaltiel dia nivazivay mikasika izay mety ho tombony ho azon'ireo tanàna Israeliana hiharan'ny daroka balafomanga.
@itamars: Raha tafihantsika i Iran, hitontona eto Tel Aviv ny balafomanga. Raha mitontona eto Tel Aviv ny balafomanga, hihena ny vidin-trano. Raha mitontongana ny vidin-trano, azontsika ny rariny ara-tsosialy. #WIN ( #NANDRESY) #j14